TL5012-1110SM | Infinite-Electronic.hk ထံမှရရှိနိုင် Omron Automation & Safety TL5012-1110SM စတော့အိတ် | Infinite-Electronic.hk မှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ TL5012-1110SM
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များswitchessnap လှုပ်ရှားမှု, ကန့်သတ် switchTL5012-1110SM
ကင်းလွတ်ခွင့်အားဖြင့်လိုက်နာရမည်ကင်းလွတ်ခွင့် / RoHS နေဖြင့်အခမဲ့ခဲ
TL5012-1110SM PDF ကို Datasheet
TL5012-1110SM ဒေါင်းလုပ် Datasheet
Omron Automation & Safety TL5012-1110SM Buy
ဖေါ်ပြချက်: IC REG CTRLR BOOST/FLYBACK 8SOIC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 108878 pcs
ဖေါ်ပြချက်: IC VIDEO SWITCH TRPL SPDT 16SOIC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 4266 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: B&K Precision
ဖေါ်ပြချက်: HIGH PERFORMANCE BENCH DMM ASSY
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 654 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6304 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TL5012-2 220VAC 3NC STD. ACTUATO
ဖေါ်ပြချက်: MAXI-PRO DMM KIT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 1209 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 60007 pcs
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 52204 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TL5012-1 220VAC 2NC+1NO STD. ACT
ဖေါ်ပြချက်: TL5012-1 24VAC/DC 2NC+1NO STD
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 246 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TL5012-2 24VAC/DC 3NC STD. ACT
ဖေါ်ပြချက်: TL5012-2 110VAC 3NC STD. ACTUATO